Outdoor indoor furniture elegant rattan wicker leisure swing basket chair, Outdoor Furniture from China on TopChinaSupplier.com
Mbido ulo ngwaahịa Oche oche Ime ụlọ dị n’ime ụlọ mara mma rattan wicker ntụrụndụ na-agbanye oche nkata
Ime ụlọ dị n’ime ụlọ mara mma rattan wicker ntụrụndụ na-agbanye oche nkata
5 Ibe US $ 109.00 / piece
Ọbịbịa Ọhụrụ Onye Na-agba Ohu Ihu Ala White Sofa Aluminium Ga
US $ 366.00 Tọọ
Outdoor/indoor furniture elegant rattan/wicker leisure swing basket/chair
Ọ BỤGHỊ: TF-9721
Ogo ngwaahịa (cm): 95 * 118CM
ihe: PE Rattan,Steel
ọrụ: N'ime, n'èzí
Ihe: Nlele SGS ule
49 PCS/20GP, 114PCS/40HQ
Oge mmepụta: 15-25days mgbe nkwụnye ego / conguzosiri ike / ied
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: T / T, L / C, Western Union, Paypal
Port: Ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen / Guangzhou
Zuru ezu ngwaahịa Desnkenke
Olee otu esi eme ya?
Iji oihe eji mara ezigbo mma, usoro anyị bụ mgbochi na-adịghị egbu egbu. Aka anyi nke ukwu resin wicker
na-enye nlezi anya nke arụmọrụ nke na-eguzogide nkewa na chipping. A na-ekpuchi akụkụ nke ọ bụla
aluminom siri ike fmgbu nke na-enye nkwụsi ike zuru oke na ndụ ndụ.
1.100% ejiri aka mere ya site n'aka ndi omenkà nwere aka
2. Ma adabara ime ụlọ & n'èzí
3. Igwe ọkụ UV dị mma, oke ọkụ na-eguzogide ọgwụ, na-eguzogide ihu igwe, na-enweghị ụcha
4. jiri akwa ikuku na-adọrọ mma maka nhọrọ
5. Pee rattan & kwushin & Ohiri isi na agba dị ka amasị gị
6. Ngwa ahia eji eme enyi nke ọma site na ọnụahịa kacha asọmpi
7. Ngwaahịa niile na-enye nkwa dịkarịa ala afọ 2
8. OEM ma ọ bụ ODM dị
Nhọrọ ndị ọzọ maka usoro ndị ọzọ:
Detuo link na ntụgharị nbudata: https://www.tanfly.com/PDF/Tanfly-color.pdf
TANFLY Furniture Co., Ltd bụ onye nrụpụta kachasị elu na onye na-ebupụ ahịa nke nwere ihe karịrị afọ 6, ụlọ ọrụ ahụ achịkọtala otu talent ma na R&D, n'ichepụta na ire ahịa sofa sofa, sofa modular, nri iri nri, oche na tebụl, oche mmanya, ebe ezumike, ọkụ tubing oche, siwing oche, n'èzí nche anwụ ngwaahịa.
TANFLY na-arara onwe ya nye providingnye “Ihe Nlekọta Ihe Nlekọta Ihe Nzuzo Ziri Ezi”ndị na-emegharị ụwa. TANFLY nwere coiji bido ijere ndị mmekọ ụwa karia:
Ø Mmepụta base: Acreage: 7,000 square mita, gunyere: Production base, R & D Center, pleslọ ngosi ihe ngosi
Equipment Ngwongwo Production: igwe Alumini Mgbuji, Ngwunye igwe, Pingder igwe, igwe nkpu, igwe ndi ozo;
Ability Ike Mmepụta: Ike imepụta kwa afọ: igbe 300 * 40HQ.
Ø Imirikiti akụrụngwa nke ngwaahịa anyị ka nwalere kpam kpam dịka SGS si kwuo.
Biko jiri obi oma chọta faili ejikọtara maka asambodo akwụkwọ maka ule ihe ndị a.
OEM: Obi dịkwa anyị ụtọ na anyị bụ ndị na-ebubata ihe OEM maka mmadụ abụọ n'ime ụlọ ọrụ rattan na-ewu ewu na ụwa (ọ bụghị codị mfe iji kpughee aha ha, otu dị na US, otu dị na Australia).
Ø akpụzi mmepe: R&D Center bụ respoenwere ike maka mmepe niile na ebu, anyị ga-ezute ihe osise ọhụụ.
Warranty Akwụkwọ ikike akwadoghị: 24 moụrọ (gbakọọ site na ụbọchị nrụpụta site na TANFLY) maka ihe ndị ọzọ eji achọ ụlọ.
Ø Mkpesa: Anyị nwere usoro ọrụ dị mma maka mkpesa ndị ahịa. Anyị ga-edozi ya dịka o kwere mee mgbe anyị nwetara foto ahụ, nsogbu description, nọmba usoro maka ihe na nọmba ọnụ ọgụgụ maka mkpesa. Na oge nkwa mmachi enyere aka, akụkụ gafee ọnụ, anyị ga-akwụ gị ụgwọ nha ma ọ bụrụ na ihe mkpesa ahụ apụtaghị ụbọchị ikike akwụkwọ ikike anyị.
elegent rattan chair
ihe eji achọ akwa
elegant rattan sofa
elegant rattan sofa set
elegant rattan ottoman